Ubuntu Software တွေ ရှယ်ကြမယ် - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
Ubuntu Software တွေ ရှယ်ကြမယ်
13-11-2012, 02:46 AM
Ubuntu တော့ သုံးတော့ သုံးနေတာပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဘာအတွက် သုံးလို့ ရမှန်း မသိရင် သိပ်မကောင်းဘူး။ ဒါမှမဟုတ် Facebook လောက်ပဲ သုံးနေတယ် ဆိုလဲ ဘယ်ဆော့ဝဲတွေက ကိုယ့်အတွက် အသုံးဝင်လဲ သိရင်ကောင်းတာပေါ့။ တစ်ယောက်ထဲ အသိဆို အရမ်းနည်းလွန်း အားကြီးတယ်။ ဘာတွေ ရှိလို့ ဘာရှိမှန်း မသိဘူး။ ဘယ်လို သုံးရမှန်း မသိဘူး။ တနေကုန်လဲ ထွက်သမျှ လိုက်မစမ်းနိုင်ဘူးလေ။ အဲလို မဖြစ်အောင် ဘယ်ဆော့ဝဲ ကောင်းတယ်။ ဘယ်လို သုံးလဲ ရှယ်ကြရအောင်ဗျာ။ သုံးနည်း မရေးပေးလဲ ရတယ်။ ဘယ်ဆော့ဝဲက ဘာအတွက် သုံးလို့ ရတယ်ဆိုတာ သိရင်တော်ပြီ။ ကျွန်တော် သုံးတာလေးတွေလဲ နည်းနည်းဆီ ရေးပေးမယ်။ တခြားအကိုအမတွေလဲ ကိုယ်သုံးတာလေးတွေ ၀ိုင်းရေးပေးကြပါ။
ပထမဆုံး စမဲ့ ဆော့ဝဲက Ubuntu ဟန်းရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
အင်တာနက်မှာပဲ ကြည့်ကြည့်၊ သူများကို မေးရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် Ubuntu တင်ပြီးပြီးချင်း ဘာလုပ်မလဲဆို Update လုပ်မယ်။ Restricted Extras သွင်းမယ် စတာပဲ ပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲလို မဟုတ်ဘူးဗျ။ ဟန်းသွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။
ဟန်းသွားရင် Ubuntu မှာ system monitor ဆိုတာ ပါတယ်။ သူ့ကနေ End Process လုပ်လို့ ရတယ်။
System Monitor တောင် ဖွင့်လို့ မရရင်ကော။
Keyboard Layout မှာ x Server ကို kill လုပ်တဲ့ shortcut ထဲ့လို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ default က မ ON ထားဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ မ On ပါဘူး။ x Server တစ်ခုလုံးကို kill လုပ်တာ များလွန်းတယ်။ ကျွန်တော် စစချင်း လုပ်တာက system settings >> keyboard >> shortcuts မှာ custom shortcut တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။
command ကို " xkill " လို့ ပေးလိုက်။ Shortcut key ကတော့ ကိုယ်ကြိုက်တာပေါ့။ e.g. Ctrl + Alt + Backspace
ဒါဆို application တစ်ခု ဟန်းသွားရင် Ctrl + Alt+ Backspace နှိပ်၊ မြှားလေးထွက်လာမယ်။ လိုချင်တာကို Delete လုပ်ရုံပဲ။ နောင်တကယ်လို့ ဒီထက်ပိုဆိုးတာမျိုး ဖြစ်ရင်ကော။
command line task manager တစ်ခု သွင်းထားပါ။ Ubuntu မှာ top ဆိုတဲ့ command line ဆော့ဝဲပါတယ်။ သုံးလို့ ရပေမဲ့ သိပ်မကောင်းဘူး။ ကျွန်တော်က ပိုလွယ်တဲ့ htop ကို သွင်းလိုက်တယ်။
Software Sources ကနေ universe, multiverse, main ကို enable လုပ်ထားမယ်။
Terminal ကို ဖွင့်၊
စစချင်း Terminal နဲ့ ဘာလို့ update လုပ်ခိုင်းလဲ ဆိုတော့ မဟန်း စေချင်လို့။ Ubuntu Update Manager က တော်တော်ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ စက်စသွင်းသွင်းချင်းဆို သူ့အလိုလို update လုပ်ဖို့ ကြိုးစားတယ်။ သူက အလိုလို လုပ်နေတာကို ကိုယ်က သွားရှုပ်မိရင် စက်က ဟန်းသွားတတ်တယ်။ ဒီတော့ စိတ်ချရအောင် Terminal ကနေ sources ကို apt-get update နဲ့ update လုပ်လိုက်တယ်။
htop ကို ဘယ်လို သုံးမလဲ
သူက command line program ဖြစ်လို့ Terminal ကနေ သုံးရပါတယ်။
Terminal ကို ဖွင့် " htop " လို့ ရိုက်ထဲ့ပါ။ ကွင်းမလိုပါ။ အောက်က လိုမျိုး ထွက်လာမယ်။ လန့်မသွားပါနဲ့။ သုံးနည်း ရှင်းပြပေးပါမယ်။ လန့်သွားမှာစိုးလို့ ပုံကို အသေး လုပ်ထားတယ်။
htop ကို စကြည့်ရင် ထိပ်ဆုံးမှာ ကိုယ့် CPU, memory, swap Usage ကို ပြပေးပါတယ်။ ပုံမှာ Dual Core CPU မို့ 1,2ဆိုပြီး ပြတယ်။ Memory မှာ Used/Total (254/991 MB) ဆိုပြီး ပြတယ်။ ဆိုလိုတာက Memory 1 GB မှာ 254 MB သုံးနေတယ်ပေါ့။ Swap မှာ လဲ memory အတိုင်းပါပဲ။
သူ့အောက်မှာ ဇယားတွေ တွေ့မယ်။ ခဏမေ့ထားလိုက်။ ကျွန်တော်တို့ အစိမ်းတန်းနဲ့ အပြာတန်း ၂ ခုပဲ စကြည့်မယ်။ အစိမ်းတန်းက Blogs တွေလို Categories ခွဲပေးတာပါ။ ၃ ခုပဲ သိဖို့ လိုတယ်။ CPU%, Mem% (memory) နဲ့ Command ကိုပါ။ CPU% တို့, Mem% တို့ကို mouse နဲ့ လိုက်နှိပ်ကြည့်လို့ ရတယ်။ မနှိပ်လဲ ရတယ်။ စစခြင်းက CPU% ကို ပြပေးပါတယ်။ အစိမ်းရောင်တန်းအောင်မှာ အပြာရောင်တန်း ရှိတယ်။ သူက CPU% မှာ ရှိတဲ့ဟာတွေပါ။ အပြာတန်းကို Arrow Keys နဲ့ အထက်၊ အောက် ရွှေ့လို့ရပါတယ်။ CPU အများဆုံးသုံးထားတဲ့ Processes တွေကို အစဉ်လိုက် စီထားတာပါ။
ကြည့်ရတာ အရမ်းရှုပ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ်။ Tree View ရအောင် ကီးဘုတ်ကနေ " t " လေးကို နှိပ်ပါ။ Tree View အတိုင်း ဘယ် process အောက်မှာ ဘာရှိလဲဆိုတာ ထွက်လာမယ်။
ကျွန်တော် Firefox ကို ဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ အစိမ်းရောင် command အောက်မှာ /usr/lib/bin/firefox ဆိုပြီး Process တစ်ခုတိုးလာပါတယ်။ " t " နှိပ်ပြီး tree view နဲ့ ကြည့်နေတဲ့အတွက် firefox နောက်ကွယ်က ကျွန်တော်တို့ မသိတဲ့ process တွေကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဆိုပါစို့။ Firefox က CPU / Memory သုံးတာများတယ်ထင်တယ်။ သူ့ကြောင့် ဟန်းနေတယ် ထင်တယ်။ သူ့ကို သတ်ချင်တယ်။ အပြာရောင်အတန်းလေးကို Arrow keys နဲ့ အထက်၊ အောက် Firefox process ဆီရောက်အောင် ရွှေ့ပါတယ်။ Tree view မို့လို့ ထိပ်ဆုံး process ကအစ အောက်ပိကြိ process အကုန် တွေ့ပါတယ်။ ကိုယ်သတ်ချင်တဲ့ process ဆီရောက်အောင် အပြာတန်းကို ရွှေ့ပြီး " Space " ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ အ၀ါတန်း ဖြစ်သွားပါမယ်။
အ၀ါတန်းက ကိုယ် ဒီ process ကို သတ်တော့မယ်လို့ select လုပ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ Process အများကြီးကို select လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကောင်းတာက Tree view နဲ့ ကြည့်၊ ထိပ်ဆုံးက main process ကို select လုပ်တာပါ။ (မှားလုပ်မိရင် Shift+u နဲ့ Unselect ပြန်လုပ်လို့ရပါတယ်) ကိုယ်လိုချင်တာ select လုပ်ပြီးလို့ တကယ်သတ်တော့မယ်ဆိုရင် " k " ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Terminal Screen အောက်ဆုံးမှာ
Enter - Send ... Esc - Cancel
ဆိုပြီး ထွက်လာမယ်။ Enter နှိပ်လိုက်ရင် ကိုယ် select လုပ်တာကို သတ်ပါမယ်။ Esc ဆိုတော့ Cancel ပေါ့။
လွယ်ပါတယ်နော်။ htop ကို ပြန်ထွက်ချင်ရင် " q " ကို နှိပ်ပါ။
htop က ဘာကောင်းလဲ။ တခြားနည်းနဲ့လဲ သတ်လို့ ရတာကို။
တခါတလေ ဘာမှ လုပ်လို့ မရတော့တဲ့ အခြေအနေရှိပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးမှာ Console mode ကို Ctrl + Alt + F1 or F2 or ... F6 ထိ တခုခု နှိပ်လိုက်ပါ။ ကွန်ပျူတာ ဘယ်လောက် ဟန်းဟန်း console mode ကတော့ ၀င်လို့ ရပါတယ်။ F7 ကတော့ လက်ရှိ GUI mode ပါ။
CPU usage အရမ်းများတဲ့ process ကို kill လုပ်ပစ်။
q ကို နှိပ်ပါ။
GUI mode ကို Ctrl + Alt+ F7 နဲ့ ပြန်ဝင်လို့ ရပါပြီ။
ပြည့်ဖြိုးကိုကို, bagothar85, kyawminkhoung, KznT, nightman, tu tu, yelinoo, zin ko phyoe
ပြန်စာ - Ubuntu Software တွေ ရှယ်ကြမယ်
Tipp10 Typing Tutor for Ubuntu
ဒီ typing tutor လေးကို သဘောကျတယ်။ လက်ကွက်လဲ မြင်ရတယ်။ လှလဲ လှတယ်။ ကိုယ့် Progress ကိုလဲ စကြည့်လို့ရတယ်။ စစချင်း လက်ထားပုံ asdf jkl; စသဖြင့် အခြေခံကစပြီး စနစ်တကျလဲ ရှိတယ်။ ကိုယ်ပိုင် Lessons တွေ ထဲ့ချင်ရင်လဲ ရတယ်။ Install လုပ်ရလဲ လွယ်ပါတယ်။ http://www.tipp10.com/en/ ကနေ Deb file လေးကို Gdebi နဲ့ သွင်းရုံပဲ။
မောင်သံသရာ, bagothar85, kyawminkhoung, KznT, nightman, tu tu, yelinoo
အများစုက ပြောကြတယ်။ Linux မှာ ဆော့ဖို့ ဂိမ်းကောင်းကောင်း မရှိဘူး။ အရင်ကတော့ မှန်ကောင်း မှန်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအဆို မှားဖို့ လမ်းစက ပျိုးနေပြီနော်။ အခု နာမည်ကြီး Steam က Linux ကို Port ဖို့ လုပ်နေပြီ။ Steam ၀င်လာရင် High quality games အများကြီး Linux ဘက်ရောက်လာမယ်။
နောက်ပိုင်း Game တွေက အခွေနဲ့ သိပ်မထုတ်ကြတော့ဘူး။ ခိုးကူးတွေ များလို့။ Xbox, PS3 တို့ပဲ များလာတယ်။ PC Game ရှိခဲ့ရင်လဲ Steam တို့လို မှာ တင်ရောင်းကြတယ်။ Pirate ရန် အေးတာကိုး။
Steam က လောလောဆယ်ဆယ် လူတိုင်း မရသေးပေမဲ့ Steam လို Desura (http://www.desura.com/) ရှိပါတယ်။ Linux Games တွေ တော်တော်များများ သူ့ဆီမှာ ရှိပါတယ်။ Paid လဲ ရှိတယ်။ Free games - savage, urban terror, opean area, ufo alien invasion, online MMROPG စသဖြင့် အများကြီးပါ။
ဒီလို Steam, Desura လို့က ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ Install လုပ်ရလွယ်တယ်။ Dependencies တွေ ရှာနေဖို့ မလိုဘူး။ သူ့ account လုပ်၊ client ထဲဝင်။ ကိုယ်ဆော့ချင်တဲ့ ဂိမ်းဝယ် သို့မဟုတ် Free Game ကို တန်း Install လုပ်။ လွယ်မှလွယ်။ ဘယ် package သွင်းရမလဲ။ ဘာမှ မလိုဘူး။ မလိုချင်ရင် ပြန် uninstall လုပ်ရလွယ်တယ်။ Game Screenshots, update, patches အကုန် အလွယ်တကူ ရတယ်။ Steam အမြန်ဆုံး Ubuntu ကို ရောက်လာပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
Savage Screenshot လေးလှလို့ တင်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဂိမ်းဆော့ဖို့ အချိန်မရလို့ တခါမှ မဆော့ဖူးဘူး။ ဂိမ်းသေးသေးလေးတွေပဲ တခါတလေ အပျင်းပြေ ဆော့တယ်။
မောင်သံသရာ, bagothar85, kyawminkhoung, KznT, tu tu, yelinoo
FL Studio အတွက် Alternative ဆိုပြီး လုပ်ထားတဲ့ Project LMMS - Linux Multimedia Studio ပါ။ ကောင်းမကောင်းတော့ မသုံးတတ်လို့ မပြောတတ်ဘူး။ ကို kyawminkhoung ကို မေးကြည့်မှပဲ ရမယ်။ ပုံကတော့ တော်တော် ကောင်းမဲ့ပုံ ပေါက်တယ်။ Ubuntu Software Center ကလဲ သွင်းလို့ ရတယ်။ lmms လို့ ရှာရုံပဲ။ icon တော့ ပျောက်နေတယ်။ Update လိုချင်ရင် http://lmms.sourceforge.net/home.php မှာ ယူပေါ့။
Programmer တွေ အတွက် Development tool ဘာရှိသလဲ။ အများကြီးတော့ အများကြီးပဲ။ ဘာကောင်းလဲတော့ ကျွန်တော်က Programmer မဟုတ်တော့ မပြောတတ်ဘူး။ သူများတွေ Recommend ပေးတဲ့ထဲမှာ
1. Sublime Text ( http://www.sublimetext.com/ )
2. Geany (Ubuntu Software Center)
ကျွန်တော် xkb keyboard လုပ်တုံးကတော့ Geany သုံးတယ်။ တော်တော်လေးကို ကောင်းတယ်။ ပေါ့တယ်။ မြန်မာစာတွေ့ရတယ်။ History တွေ ပြန်ကြည့်လို့ ရတယ်။ Terminal လှမ်းသုံးလို့ရတယ်။ အနီရောင် Title bar က ကိုယ့် Ubuntu Theme ကို လိုက်ပြောင်းတာပါ။
တချို့ တချို့တွေကတော့ Built in ပါလာတဲ့ Gedit ကကောင်းတယ်တဲ့။ Plugins ထဲ့လိုက်ရင်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မကောင်းဘူးလို့ပဲ ထင်တယ်။ Gedit က အရမ်းလေးပြီး တချို့ ဖိုင်တွေ ကောင်းကောင်း မဖွင့်နိုင်ဘူး။ သူများရေးထားတာ မကြည့်ဘဲ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး လုပ်ရင်တော့ တမျိုးပေါ့။
ဒီတခုက Ubuntu စက်တိုင်းမှာ မရှိမဖြစ် ရှိထားသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲပါ။ System Tool တခုပါ။ Dconf Editor လို့ ခေါ်တယ်။ Ubuntu 12.10 မှာတော့ default ပါလာပြီး
ဘာကောင်းလဲ ဆိုတော့ system တစ်ခုလုံးရဲ့ configuration တွေကို ပြင်လို့ ရတယ်။ Default apps တွေရဲ့ configuration တွေကို ပြင်လို့ ရတယ်။ ဘယ် software ရဲ့ ဘယ် functions အတွက် value ကို Terminal နဲ့ တွဲသုံးပြီး ရှာလို့ရတယ်။ Program ရေးတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်၊ system ကလိုတဲ့သူ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ tool မသုံးရင် အရမ်းမိုက်မဲတဲ့သူပဲ။ လွယ်လွယ်ကူကူ နည်းကို အဝေးကြီးမှာ လိုက်ရှာနေလို့။ သုံးတတ်ဖို့တော့ နည်းနည်း လိုက်ဖတ်ရတယ်။ ဥပမာ - ဒီ settings က dconf editor မှာ ဒီလို ရှိတယ်။ application settings ကို ပြောင်းကြည့်တယ်။ dconf editor မှာ value လုပ်ပြောင်းသွားတာ။ ပြီးရင် gsettings နဲ့ ဖြစ်ဖြစ် get - function သုံးပြီး ဘာ value, options ရှိလဲ ရှာလို့ ရတယ်။ အဆင်ပြေရင် ကိုယ်တိုင် သုံးရလွယ်အောင် shortcuts တွေထဲ value ထဲ့သုံးလို့ ရတယ်။
မျိုးဟန်ထက်, မောင်သံသရာ, bagothar85, kyawminkhoung, KznT, nightman, tu tu, yelinoo
အသံပိုင်းဆိုင်ရာ Recordings တွေ လုပ်နေတဲ့ သူအတွက် pavucontrol (pulse audio volume contorl) နဲ့ alamixer ကို သွင်းထားသင့်ပါတယ်။ သူတို့က ကိုယ့် input, output devices တွေကို အသေးစိတ် control လုပ်ပေးတယ်။ ဥပမာ - recording လုပ်မယ်ဆို internal microphone ကို ခဏ mute လုပ်ထား၊ အသံ ညှိ။ usb microphone ကို လိုသလို ချိန် စသဖြင့်ပေါ့။
Windows က စပြောင်းပြောင်းချင်မှာ အရမ်း သတိရတဲ့ Windows applications ကို ပြောပါဆို Paint လို့ ဆိုရပါမယ်။ ပုံတွေ ပြင်ရလွယ်တယ် ဆိုပြီးပေါ့။ Ubuntu မှာက Screenshot ဖမ်းရင် windows မှာလို copy, paste ကို paint ထဲ လာလုပ်ဖို့ မလိုဘူး။ တခါထဲ save လုပ်လို့ ရတယ်။ ပြင်ချင်ရင်တော့ paint လိုလာပြီပေါ့။ အများစုက မှားပြီး gpaint, pinta စတာတွေ သွားသွင်းတယ်။ အဲဒါတွေက paint နဲ့ မတူပါဘူး။ တကယ်တမ်း Paint နဲ့ တော်တော် နီးစပ်တာက gnome-paint (Gnome Paint Drawing Editor) ဖြစ်ပါတယ်။ Pinta က အရမ်းကောင်းတဲ့ Editor ပါ။ သူက Paint.net နဲ့ တူတယ်လို့ ပြောလို့ ရမယ် ထင်တယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ပိုကောင်းတဲ့ Shutter ကိုပဲ သုံးဖြစ်နေတော့တယ်။ သူလဲ image edit လုပ်လို့ ရတာကိုး။
မောင်သံသရာ, kyawminkhoung, KznT, tu tu, yelinoo
14-11-2012, 02:09 AM
Ubuntu အတွက် Webcam Software
၂ ခု ရှိပါတယ်။ တခုက
1. Cheese - Special Effects တွေ ဘာတွေ ပါတယ်။ တခြား derivatives တွေ သုံးရင်တော့ မလိုတဲ့ packages တွေပါ သွင်းတတ်တယ်။
2. Guvc Viewer - သူက special effects တွေ မပါဘူး။ ပေါ့တယ်။
၂ ခုလုံးကို software center က သွင်းလို့ ရပါတယ်။
အရမ်းနှေးနေရင်တော့ video quality ကို လျှော့ပြီး record လုပ်ပါ။
တခါတလေ skype တို့၊ ဘာတို့ camera settings ချိန်ရင်း အချိန်လွန်ပြီး camera လုံးဝ မဲသွားတာဆို ဒီ ဆော့ဝဲ ၂ ခုက ၀င်ပြင်လို့ ရပါတယ်။
မောင်သံသရာ, kyawminkhoung, KznT, nightman, tu tu, yelinoo
နောက် software တစ်ခုက Cuttlefish ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲပါ။ Ubuntu Apps contest တုန်းက ထွက်လာတဲ့ app ပါ။ ဆုရသွားတာက Fogger, Light Read တို့ ဖြစ်ပေမဲ့ Cuttlefish ကို အားလုံးထက် ပိုကြိုက်ပါတယ်။ သူက ဘာလုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲလဲ ဆိုတော့ ကိုယ်က stimulus တစ်ခုပေးလိုက်ရင် တခြား response ပြန်လာအောင် လုပ်ပေးတဲ့ ဆော့ဝဲပါ။
ဥပမာ - Firefox ဖွင့်လိုက်တယ်။
တပြိုင်နက် Firewall, Download Manager အလိုလို ပွင့်လာတယ်။
Volume ကို လျှော့ပစ်လိုက်တယ်။
Music Player ဖွင့်လိုက်တယ်။
Bluetooth ကို ဖွင့်လိုက်တယ်။
Volume ကို တိုးလိုက်တယ်။
USB device တစ်ခုကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။
Screen Log out ကျအောင် လုပ်ပေးတယ်။
စသဖြင့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံစံ လုပ်လို့ ရပါတယ်။ အားလုံးတော့ မရသေးပေမဲ့ အခြေခံ လိုအပ်တာတွေ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ လောလောဆယ်ဆယ်တော့ 12.04 Software Center အတွက်ပဲ ရှိပြီး၊ 12.10 အတွက် update မလုပ်ထားပါဘူး။ လိုချင်ရင် https://launchpad.net/cuttlefish ကဖြစ်ဖြစ်၊ 12.04 repo သွင်းပြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ် စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
kyawminkhoung, KznT, lu soe, nightman, tu tu, yelinoo
Easystroke Gesture recognition software ပါ။ Mouse gesture လေးနဲ့ လုပ်တတ်ရင် အကုန်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Ipad လောက်တော့ သနားတယ်။ Software Center ကနေ သွင်းလို့ ရပါတယ်။ video ထဲမှာတော့ simple command နဲ့ ဆော့ဝဲ ဖွင့်တာပဲ ပြထားပါတယ်။
bagothar85, kyawminkhoung, KznT, lu soe, tu tu, yelinoo
Unity သုံးတဲ့ သူတွေအတွက် Custom Launcher လေးတွေ လိုလာကြမှာပါ။ Built-in ပါတဲ့ Apps တွေ အတွက် မလိုပေမဲ့ သီးသန့် binaries ပါပြီးသား Local Run လို့ ရတဲ့ လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲကြတော့ Quicklists မရှိပါဘူး။ မပူပါနဲ့။ Create Launcher ဆိုတဲ့ ဆော့ဝဲ ရှိပါတယ်။ https://apps.ubuntu.com/cat/applicat...eate-launcher/
Ubuntu software center ကပဲ ရပါမယ်။ ကျန်တဲ့နေရာက မရပါဘူး။ နောက်တခုက MenuLibre ဆိုတာပါ။ (App contests သုံးက ထွက်လာတဲ့ ဆော့ဝဲလို့ ထင်ပါတယ်) 12.04 မှာပဲ ရှိပါတယ်။ https://launchpad.net/menulibre
အရင်က Menu Editor - alarcarte ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Unity အတွက်တော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး။ နောက် Ubuntu Tweak သုံးလို့ ရပါတယ်။ Ubuntu Tweak ကတော့ နောက်ပိုင်း သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ မလိုအပ်တဲ့ functions အရမ်းများပြီး ခဏခဏ crash ဖြစ်တယ်လို့ ထင်မိတယ်။
Ubuntu Software Center က Create Launcher ကို သွင်းတဲ့အခါ ပုံမှန်လို သွင်းရတာ မဟုတ်ပဲ နည်းနည်း ကြာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း software-center က app store လို ဖြစ်သွားပါတယ်။ Applications တွေ ရောင်းလာတယ်။ Games တွေ ရောင်းလာတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ရတာတွေ ဖြစ်လို့ repo က တခုချင်းဆီ ဖြစ်လာတယ်။ Free ပေးတဲ့ Private apps တွေကြတော့ ကိုယ်ပိုင် Launchpad repo နဲ့ပါ။ Ubuntu One account လိုပါမယ်။ စစချင်း Buy 0.00 ကို နှိပ်ရင် သူ့သီးသန့် repo ကို အရင်သွင်းနေတာမို့ နည်းနည်းကြာပါမယ်။
ဆော့ဝဲ တခါဝယ်ပြီးရင် နောက်ပိုင်း reinstall လုပ်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် software center ကနေ ပြန်အလွယ်တကူ ပြန်သွင်းလို့ ရပါတယ်။
တချို့တွေကတော့ Ubuntu က ပိုက်ဆံပေးရတဲ့ apps တွေများလာတာ မကြိုက်ကြဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ကြိုက်ပါတယ်။ Software Center ကြောင့် Linux apps တွေ အရင်က မသိတာ သိလာတယ်။ အရင်က မရှိတာ ရှိလာတယ်။ FOSS လို့ အော်ပြီး open source ထားတဲ့ ဆော့ဝဲ ကောင်းတွေ ဘယ်သူမှ မပြင်မဆင်ပဲ အလကား ဖြစ်သွားတာထက် စာရင် Paid, demo, free private apps တွေ ထွက်လာတာကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ နောက်ပြီး Ubuntu က Linux mint ထက်စာရင် ပြင်လို့ ပိုကောင်းတယ် ထင်တယ်။ Ubuntu flavor လုပ်ပေမဲ့ Linux mint customization လောက် အရမ်း intrusive မဖြစ်ဘူး။ ပြန်ဖြုတ်ရလွယ်တယ်။ Paid apps မမြင်ချင်ရင် software-center က all software အစား၊ Canonical maintained ကို select လုပ်ပေါ့။
Software Center က မသွင်းပဲ Private apps တွေ သွင်းလို့ မရဘူးလားဆိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ websites မှာ သွားဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ ရပါတယ်။ တခါတလေ ပို update ဖြစ်တာတောင် တွေ့ရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာ apps ရှိလဲ သိဖို့ကတော့ software-center သုံးတာလောက် ဘယ်ဟာမှ မလွယ်ပါဘူး။ Reviews sites ကလဲ ဒါပြီး ဒါပြန် ပတ်ချာလည်နေလို့ လူမသိတဲ့ ဆော့ဝဲတွေ အများကြီးပါ။
bagothar85, kyawminkhoung, KznT, tu tu, yelinoo
အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲထဲမှာ Synapse ပါပါတယ်။ Software Center - Top rated ထိပ်ဆုံးနားမှာ ရှိပါတယ်။ သူက Mac OS နာမည်ကြီး quicksilver တို့လို productivity tool တစ်ခုပါ။ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ applications, files တွေကို shortcut တချက်နှိပ်၊ ကီးဘုတ်က စာ ၂ လုံးလိုက် ရိုက်ရုံနဲ့ ရှာလို့ ရပါတယ်။
Ubuntu မှာ Unity Home lens က အဲလို functions မျိုး ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ နှေးလို့ အသုံးဝင်သင့်သလောက် အသုံးမ၀င်ပါဘူး။ အရင်က Gnome-Do က Quicksilver alternative ဆိုလို့ သုံးကြည့်ဖူးတယ်။ ကောင်းသင့်သလောက် ကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ Synapse ကို မမှီပါဘူး။ Synapse က apps ရှာတာဖြစ်ဖြစ်၊ files ရှာတာ ဖြစ်ဖြစ် အရမ်းမြန်ပါတယ်။ ကီးတချက်နှိပ် ချက်ချင်းကို results နည်းနည်း၊ မှန်မှန် ထွက်ပါတယ်။ နောက် applications တွေဆို သူ့ description ကိုပါ - စာသားလေးပြေးပြီး ဖော်ပြပေးပါတယ်။ အရမ်းကောင်းပြီး မရှိမဖြစ် သုံးသင့်တဲ့ ဆော့ဝဲပါ။
bagothar85, kyawminkhoung, KznT, lu soe, nightman, tu tu, yelinoo
Mendeley Desktop http://www.mendeley.com/ - Reference Manager နဲ့ Citation Tools ပါ။ MS Word, Open Document, PDFs တွေကို စနစ်တကျ Organize လုပ်လို့ ရပါတယ်။ Research အတွက် သုံးလို့ ရတယ်။ PDF, Documents တွေကို highlight လုပ်လို့ရတယ်။ annotate လုပ်လို့ရတယ်။ Online 1 Gb storage ပေးပြီး နေရာတကာက သုံးလို့ရတယ်။
PDF Reader ဆိုလဲ မြန်တယ်။ edit လုပ်လို့ ရတယ်။ မကောင်းတာက bookmarks မပါဘူး။ Linux မှာ PDF Reader ကောင်းကောင်းမရှိပါဘူး။ အကောင်းဆုံးက Adobe on 12.04 ပါ။ ဒါတောင် Adobe က 12.10 မှာ 12.04 လောက် မကောင်းပါဘူး။ Linux မှာ သူများတွေ ပေါ့တယ်ဆိုတဲ့ Evince Document Viewer ကလဲ ပေါ့တာပေါ့တယ်။ Poppler သုံးလို့ Image များတဲ့၊ ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတဲ့ PDF မြန်မြန် render မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ နောက်ပြီး annotate လုပ်ပြီး ပြန်ဖျက်လို့ မရတာက ဆိုးတယ်။ Chrome လဲ ဒီလိုပဲ။ မြန်တော့မြန်တယ်။ ဒါပေမဲ့ pdf file size ကြီးရင် ဟန်းပါတယ်။ bookmarks မပါလို့ သုံးရခက်ပါတယ်။ Firefox - pdf.js ကျပြန်တော့ စစချင်း load တက်တာ နှေးပါတယ်။ နောက်ပြီး file size ကြီးရင် crash ပါတယ်။ Mendeley ကတော့ Adobe alternative သုံးလို့ ရတာပေါ့။
ဒါပေမဲ့ မကောင်းတဲ့အချက်က Online access လိုပါတယ်။ sync က ခဏ ရပ်ထားလို့ ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ စ၀င်ရင် account နဲ့ ၀င်ရတော့ အဲဒါ သူ့အားနည်းချက်လို ဖြစ်နေတယ်။ အင်တာနက် အမြဲရတဲ့သူဆိုတော့ ကောင်းပါတယ်။ collaboration ကောင်းတယ်။ လှတယ်။ မြန်တယ်။ တခုရှိတာက illegal ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းသတိထားပါ။ သူက academic tool ဖြစ်လို့ documents တွေကို အွန်လိုင်း data နဲ့ analyse လုပ်လို့ပါ။
Last edited by g00gle; 15-11-2012 at 02:26 PM..
Windows software တွေကို သုံးဖို့လိုတဲ့ လူအတွက် wine ရှိပါတယ်။ ubuntu repo မှာ ရှိပေမဲ့ အမြဲ versions နိမ့်နေတတ်တဲ့အတွက် သူ့ ppa သွင်းထားဖို့ လိုပါမယ်။ http://www.winehq.org/download/ubuntu
Wine နဲ့က applications တိုင်းတော့ မရပါဘူး။ ရတဲ့ဟာတော့ ရပါတယ်။ ဥပမာ - pdf reader တွေ ရတယ်။ Format Factory, MS Office, Page Maker စသဖြင့် ရပါတယ်။
Wine သုံးမယ်ဆို ကောင်းတာက Wine Front End သုံးတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က Virtual drives လေးတွေ လုပ်ပြီး windows applications ကို run တာ ဖြစ်လို့ ကိုယ့် system မထိခိုက်ပါဘူး။ နောက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ libraries ကို အလိုလို ရှာသွင်းပါတယ်။
Commercial အနေနဲ့ cross over ရှိပါတယ်။ Free အနေနဲ့ PlayonLinux ပါ။ ၂ ခု ဘယ်ဟာ ပိုကောင်းလဲ။ ကျွန်တော် မသိပါဘူး။ ဟိုတလောက Cross Over giveaway ရှိလို့ စမ်းကြည့်သေးတယ်။
Run လို့ ရတဲ့ applications က သိပ်မကွာပါဘူး။ Cross over ကတော့ လုပ်ထားတာ ပိုသေသပ်တယ်။ Virtual drive - create, delete နားလည်လွယ်တယ်။ PlayonLinux လို စစဖွင့်ခြင်း Internet ချိတ်ပြီး လိုတာတွေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ မလိုဘူး။
Front End တွေ မသုံးချင်ရင်တော့ run ချင်တဲ့ ဆော့ဝဲကို executable ဖြစ်အောင်လုပ်၊ right click >> run with wine program loader နဲ့ run လို့ ရပါတယ်။ တခုရှိတာက wine နဲ့ပဲ သုံးရင် လိုတဲ့ libraries ကိုယ့်ဟာကို သွင်းရမယ်။ error တက်ခဲ့ရင် playonlinux တို့လို ပြန်ဖျက်ရ မလွယ်ဘူး။ Wine မှာလဲ Winetricks ဆိုတဲ့ front end ရှိပါတယ်။ PlayonLinux တို့လောက်တော့ မကောင်းပါဘူး။
windows software များအစား Linux မှ software များ ပါ
3D Home Architect	 Sweet Home 3D ( http://sweethome3d.sourceforge.net/index.html )
3D Studio Max	 K-3D ( http://www.k-3d.org/ )Wings 3D ( http://www.wings3d.com/ )Art of Illusion ( http://www.artofillusion.org/ )Blender ( http://www.blender.org/ )
ACDSee	 KuickShow ( http://kuickshow.sourceforge.net/ )ShowImg ( http://www.jalix.org/projects/showimg/ )Geeqie ( http://geeqie.sourceforge.net/ )Gwenview ( http://gwenview.sourceforge.net/ )GQview ( http://gqview.sourceforge.net/ )Eye of GNOME ( http://www.gnome.org/projects/eog/ )
Adobe Acrobat Reader	 okular ( http://okular.kde.org/ )Xpdf ( http://www.foolabs.com/xpdf/ )Evince ( http://www.gnome.org/projects/evince/ )ePDFView ( http://trac.emma-soft.com/epdfview/ )
Adobe Audition	 Audacity ( http://audacity.sourceforge.net/ )
Adobe Illustrator	 Skencil ( http://www.skencil.org/ )Inkscape ( http://www.inkscape.org/ )Karbon14 ( http://www.koffice.org/karbon/ )Xara Xtreme for Linux ( http://www.xaraxtreme.org/ )
Adobe Lightroom	 Darktable ( http://darktable.sourceforge.net/ )
Adobe PageMaker	 Scribus ( http://www.scribus.net/ )
Adobe PhotoAlbum	 jBrout ( http://jbrout.manatlan.com/ )gThumb ( http://live.gnome.org/gthumb/ )Shotwell ( http://www.yorba.org/shotwell/ )F-Spot ( http://f-spot.org/Main_Page )KPhotoAlbum ( http://www.kphotoalbum.org/ )digiKam ( http://www.digikam.org/ )
Adobe Photoshop	 CinePaint ( http://www.cinepaint.org/ )Krita ( http://www.koffice.org/krita/ )GIMP ( http://www.gimp.org/ )
Adobe Premiere	 VideoLAN Movie Creator ( http://trac.videolan.org/vlmc/ )LiVES ( http://lives.sourceforge.net/ )Kdenlive ( http://kdenlive.sourceforge.net/ )Lombard ( http://yorba.org/lombard/ )cinefx ( http://www.cinefx.org/ )PiTiVi ( http://www.pitivi.org/wiki/Main_Page )Cinelerra ( http://cvs.cinelerra.org/ )Kino ( http://www.kinodv.org/ )OpenShot ( http://www.openshotvideo.com/ )
Ant Movie Catalog	 Moviefly ( https://savannah.nongnu.org/projects/lmc/ )AOL Instant Messenger (AIM)	Kopete ( http://kopete.kde.org/ )Pidgin ( http://pidgin.im )
APC PowerChute	 Network UPS Tools ( http://www.networkupstools.org/ )Apcupsd ( http://www.apcupsd.com/ )PowerD ( http://power.sourceforge.net/ )
CDex	 Sound Juicer ( http://www.burtonini.com/blog/computers/sound-juicer )Rubyripper ( http://wiki.hydrogenaudio.org/index....tle=Rubyripper )ripperX ( http://ripperx.sourceforge.net/ )Grip ( http://nostatic.org/grip/ )KAudioCreator ( http://www.icefox.net/programs/?program=KAudioCreator )
Collectorz	 aviManager ( http://avimanager.sourceforge.net/ )Tellico ( http://periapsis.org/tellico/ )GCstar ( http://www.gcstar.org/ )Alexandria ( http://alexandria.rubyforge.org/ )vMovieDB ( http://vmoviedb.sourceforge.net/ )Griffith ( http://griffith.cc/ )Katalog ( http://salvaste.altervista.org/ )
Dreamweaver	 Quanta Plus ( http://quanta.kdewebdev.org/ )Nvu ( http://www.nvu.com/ )Geany ( http://geany.uvena.de )Screem ( http://www.screem.org/ )KompoZer ( http://www.kompozer.net/ )Bluefish ( http://bluefish.openoffice.nl/index.html )
DVDShrink k9copy ( http://k9copy.sourceforge.net/ )OGMRip ( http://ogmrip.sourceforge.net/ )Thoggen ( http://thoggen.net/ )xdvdshrink ( http://dvdshrink.sourceforge.net/ )qVamps ( http://vamps.sourceforge.net/ )dvd::rip ( http://www.exit1.org/dvdrip/ )AcidRip ( http://untrepid.com/acidrip/ )
Everest	 HardInfo ( http://hardinfo.berlios.de/web/HomePage )
Evernote	 QuickFox Notes ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13572/ )BasKet ( http://basket.kde.org/ )Tomboy ( http://live.gnome.org/Tomboy/ )Zim ( http://zim-wiki.org/ )
Finale	 Lilypond ( http://www.lilypond.org )Denemo ( http://denemo.sourceforge.net/index.html )Rosegarden ( http://www.rosegardenmusic.com/ )MuseScore ( http://musescore.org/ )NoteEdit ( http://noteedit.berlios.de/ )Brahms ( http://brahms.sourceforge.net/ )
FL Studio	 LMMS ( http://lmms.sourceforge.net/ )Jokosher ( http://www.jokosher.org/ )Ardour ( http://www.ardour.org )
Fontographer FontForge ( http://fontforge.sourceforge.net/ )
foobar2000 Banshee ( http://banshee-project.org/Main_Page )aTunes ( http://www.atunes.org/ )SongBird ( http://www.songbirdnest.com )Quod Libet ( http://www.sacredchao.net/quodlibet )Exaile ( http://www.exaile.org/ )Amarok ( http://amarok.kde.org/ )Listen ( http://listengnome.free.fr/ )Rhythmbox ( http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/ )gtkpod ( http://www.gtkpod.org/ )
Forte Agent	 Pan ( http://pan.rebelbase.com/ )
Fraps	 Yukon ( https://devel.neopsis.com/projects/yukon/ )recordMyDesktop ( http://recordmydesktop.sourceforge.net/ )
FreeRIP	 Sound Juicer ( http://www.burtonini.com/blog/computers/sound-juicer )Rubyripper ( http://wiki.hydrogenaudio.org/index....tle=Rubyripper )ripperX ( http://ripperx.sourceforge.net/ )Grip ( http://nostatic.org/grip/ )KAudioCreator ( http://www.icefox.net/programs/?program=KAudioCreator )
FruityLoops	 Hydrogen ( http://www.hydrogen-music.org/ )
Google Desktop Search	 Google Desktop ( http://desktop.google.com/linux/index.html )Beagle ( http://beagle-project.org/ )
Guitar Pro	 TuxGuitar ( http://www.tuxguitar.com.ar/home.html )kguitar ( http://sourceforge.net/projects/kguitar/ )DGuitar ( http://dguitar.sourceforge.net/ )
iTunes	 Banshee ( http://banshee-project.org/Main_Page )aTunes ( http://www.atunes.org/ )SongBird ( http://www.songbirdnest.com )Quod Libet ( http://www.sacredchao.net/quodlibet )Exaile ( http://www.exaile.org/ )Amarok ( http://amarok.kde.org/ )Listen ( http://listengnome.free.fr/ )Rhythmbox ( http://www.gnome.org/projects/rhythmbox/ )gtkpod ( http://www.gtkpod.org/ )iView MediaPro	jBrout ( http://jbrout.manatlan.com/ )gThumb ( http://live.gnome.org/gthumb/ )Shotwell ( http://www.yorba.org/shotwell/ )F-Spot ( http://f-spot.org/Main_Page )KPhotoAlbum ( http://www.kphotoalbum.org/ )digiKam ( http://www.digikam.org/ )Legacy Family Tree
Meal Master	 krecipe ( http://krecipes.sourceforge.net/ )Gourmet Recipe Manager ( http://grecipe-manager.sourceforge.net/ )
Microsoft Access	 Kexi ( http://www.koffice.org/kexi/ )knoda ( http://www.knoda.org )GNOME-DB ( http://www.gnome-db.org/ )
Microsoft Excel	 KSpread ( http://www.koffice.org/kspread/ )Open Calc ( http://www.openoffice.org/product/calc.html )Gnumeric ( http://www.gnome.org/projects/gnumeric/ )
Microsoft Frontpage	 Quanta Plus ( http://quanta.kdewebdev.org/ )Nvu ( http://www.nvu.com/ )Geany ( http://geany.uvena.de )Screem ( http://www.screem.org/ )KompoZer ( http://www.kompozer.net/ )Bluefish ( http://bluefish.openoffice.nl/index.html )
Microsoft HyperTerminal	 minicom ( http://alioth.debian.org/projects/minicom/ )GtkTerm ( http://freshmeat.net/projects/gtkterm/ )
Microsoft Internet Explorer	 Opera ( http://www.opera.com/download/ )Epiphany ( http://www.gnome.org/projects/epiphany/ )Firefox ( http://www.mozilla.com/firefox/ )Konqueror ( http://www.konqueror.org/ )
Microsoft Money	 Skrooge ( http://skrooge.org/ )KMyMoney ( http://kmymoney2.sourceforge.net/ )GNUcash ( http://www.gnucash.org/ )Grisbi ( http://www.grisbi.org/ )Gnofin ( http://gnofin.sourceforge.net/ )
Microsoft Office	 OpenOffice ( http://www.openoffice.org/ )KOffice ( http://www.koffice.org/ )GNOME Office ( http://www.gnome.org/gnome-office/ )
Microsoft OneNote QuickFox Notes ( https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/13572/ )BasKet ( http://basket.kde.org/ )Tomboy ( http://live.gnome.org/Tomboy/ )Zim ( http://zim-wiki.org/ )
Microsoft Outlook (Express)	 Thunderbird ( http://www.mozilla.com/thunderbird/ )Evolution ( http://www.gnome.org/projects/evolution/ )
Microsoft Powerpoint	 Open Office Impress ( http://www.openoffice.org/product/impress.html )KPresenter ( http://www.koffice.org/kpresenter/ )
Microsoft Project	 KPlato ( http://www.koffice.org/kplato/ )OpenProj ( http://openproj.org/openproj )Planner ( http://live.gnome.org/Planner )GanttProject ( http://ganttproject.sourceforge.net/ )TaskJuggler ( http://www.taskjuggler.org/ )
Microsoft Visio	 Dia ( http://www.gnome.org/projects/dia/ )Kivio ( http://www.koffice.org/kivio/ )
Microsoft Windows Media Center	 Freevo ( http://freevo.sourceforge.net/ )XBMC Media Center ( http://xbmc.org/ )MythTV ( http://www.mythtv.org )Moovida ( http://www.moovida.com )Boxee ( http://www.boxee.tv/ )LinuxMCE ( http://www.linuxmce.com/ )
Microsoft Word	 Open Office Writer ( http://www.openoffice.org/product/writer.html )AbiWord ( http://www.abisource.com/ )Kword ( http://www.koffice.org/kword/ )
mIRC	 Konversation ( http://konversation.kde.org/ )Xchat ( http://www.xchat.org/ )KVIrc ( http://www.kvirc.net/ )BitchX ( http://www.bitchx.org/ )ChatZilla! ( http://chatzilla.hacksrus.com/ )irssi ( http://www.irssi.org/ )Pidgin ( http://pidgin.im )
Mp3tag	 Pinkytagger ( http://pinkytagger.sourceforge.net/ )Kid3 ( http://kid3.sourceforge.net/ )EasyTAG ( http://easytag.sourceforge.net/ )Cowbell ( http://more-cowbell.org/ )Audio Tag Tool ( http://pwp.netcabo.pt/paol/tagtool/ )
MSN messenger	 Mercury Messenger ( http://www.mercury.to/ )Kopete ( http://kopete.kde.org/ )aMSN ( http://amsn-project.net/ )Pidgin ( http://pidgin.im )
Mudbox SharpConstruct ( http://sharp3d.sourceforge.net )
bagothar85, blackNwhite, g00gle, KznT, lu soe, nightman, tu tu, yelinoo
B1 Archiver - Zip, Rar, 7zip, B1 Extractor
Ubuntu မှာက Windows လိုပဲ Zip file တွေကို ပြန်ဖြည်တာတို့ ဘာတို့လုပ်ချင်ရင် file-roller - Archive Manager ဆိုတာ ပါလာတယ်။ Zip format, Linux Archive formats တွေ ဖြစ်တဲ့ Tar, Bzip, bz2, Deb ဖိုင်တွေကို ဖြည်လို့ရပါတယ်။ Free format မဟုတ်တဲ့ Rar လိုမျိုး archive ဖိုင်၊ 7zip တို့ကို ဖြည်မယ်ဆိုရင်တော့ WinRar သွင်းသလိုမျိုး
sudo apt-get install p7zip-full p7zip-rar unrar
ဆိုပြီး သွင်းပေးဖို့ လိုမယ်။ ဒီလိုသွင်းလိုက်ရင် File-roller Archive Manager နဲ့ integrate ဖြစ်ပြီး right-click >> extract လုပ်နိုင်ပါမယ်။
တခြား cabextract လိုမျိုးပါ ထပ်သွင်းရင် .exe ဖိုင်တွေကိုပါ extract လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ file-roller က Lubuntu 12.10 မှာ Extract here ဆို crash ပါတယ်။ Ubuntu မှာတော့ မဖြစ်ဘူး။ နောက်ပြီး Interface က မလှတော့ ကြာတော့ သုံးချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး။
Archive Manager Alternatives ထဲမှာ နာမည်ရှိတာက Peazip ( http://peazip.sourceforge.net/peazip-linux.html ) ပါ။
သူလဲ မဆိုးပေမဲ့ သိပ်မလှဘူး။ နောက် လူမသိသေးတာက B1 Archiver ( http://b1.org/ ) ပါ။ သူကတော့ Extract လုပ်နိုင်တဲ့ format နည်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူသုံးများတဲ့ Zip, Rar, 7zip ရတော့ အဆင်ပြေပါတယ်။ သူကတော့ တခြားဟာထက် ပိုလှတယ်လို့ထင်တယ်။ မြန်လဲမြန်ပါတယ်။ နောက် Deb file နဲ့လဲရှိတော့ Install လုပ်ရလွယ်ပါတယ်။ တခုရှိတာက install လုပ်ပြီးကို သူ့ဆော့ဝဲကို တချက်ဖွင့်ပြီး guide တချက် run ပေးလိုက်ပါ။ အဲမှာ ဘယ်လိုပုံစံမျိုး လိုချင်လဲ ရွေးပေးလို့ရပါတယ်။
နောက် kgb format တွေကို archive/unarchive လုပ်ချင်ရင်
နဲ့ သွင်းလို့ ရပါသေးတယ်။
bagothar85, kyawminkhoung, lu soe, tu tu, yelinoo
ဆိုပြီး သွင်းလိုက်ရင် Test Disk နဲ့ PhotoRec recovery ဆော့ဝဲ ၂ ခု သွင်းပြီးသား ဖြစ်ပါမယ်။ Windows လိုတော့ GUI မဟုတ်တော့ လန့်စရာ ရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သုံးရတာ လွယ်ပါတယ်။ Windows ရဲ့ Recuva ထက်ကို ပိုကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Recuva လိုပဲ Low level format ချထားရင်တော့ ပြန်ဆယ်လို့ မရပါဘူး။ ရိုးရိုး Delete, Quick Format ဆို Data အကုန် ပြန်ရပါတယ်။ ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ jpg, png ပုံ ၁၈ ပုံနဲ့၊ mp3 ၁ ဖိုင်၊ m4a ၂ ဖိုင်၊ English စာပါတဲ့ text ဖိုင်တဖိုင်ကို ဖျက်ပြီး recover လုပ်ကြည့်ပါတယ်။ m4a ကို mp4 လို့မှားပြီး format တတ်တာကလွဲလို့ ကျန်တာ အကုန်ကောင်းပါတယ်။ Text file ဆို လုံးဝ မပျက်ပဲ နဂိုအတိုင်း ပြန်ရပါတယ်။ Recuva ထက် သာတာပေါ့။
PhotoRec နဲ့ recover လုပ်မယ်ဆို စစချင်း Terminal မှာ
အဲဒီမှာ ကိုယ့် hard drive, usb stick ကို တွေ့ပါမယ်။ Disk /dev/sda ဆိုတာက Hard Disk ပါ။ Disk /dev/sdb ဆိုတာက usb stick, external hard drive, 2nd hard drive ဖြစ်ပါမယ်။ အထက်၊ အောက် မြှားနဲ့ ရွှေ့လို့ရပြီး၊ ဘယ်ညာမြှားရွှေ့ရင် Proceed, Quit ရွေးလို့ ရပါတယ်။ Recover လုပ်ချင်တဲ့ usb stick ကို select လုပ်ပြီး Proceed >> Enter နှိပ်ပါတယ်။
ဒါဆို usb stick ထဲ ၀င်သွားပါပြီ။ သူ့မှာ ခွဲထားတဲ့ partitions တွေ ပြပါတယ်။ ဘာမှ ထူးထူးထွေထွေ လုပ်မနေတော့ပဲ Enter နှိပ်လိုက်ပါတယ်။ အောက်မှာ Search လုပ်မယ်ဆိုတာ ပြထားပါတယ်။
PhotoRec တို့ မကောင်းတာက recover လုပ်မဲ့ file system type ရွေးပေးရတယ်။ Linux အတွက်ဆို ext2/3 (4 ပါ recover လုပ်နိုင်ပါတယ်) ၊ Windows အတွက်ဆို FAT / NTFS / ... ပေါ့။ ကောင်းတာက PhotoRec က ဘာ file system လဲ ဆိုတာ အလိုအလျောက် သိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘာမှ ရွေးဖို့မလိုပဲ Enter နှိပ်ရုံနဲ့ ပြီးပါတယ်။
ပြီးရင် ဘယ်နေရာက ရှာမလဲ ရွေးခိုင်းပါတယ်။ whole ကို ရွေးပြီး Enter နှိပ်ပါတယ်။
ဒီနေရာကတော့ အခုမှ စသုံးမဲ့သူဆို ဘာလုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်တတ်တယ်။ ဘယ်နေရာကို recover လုပ်မလဲ မေးတာပါ။ ကောင်းတာက ဖျက်လိုက်တဲ့ usb နဲ့ မတူတဲ့ hard drive ဖြစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Ubuntu file structure က Home folder အောက်မှာရှိတဲ့ Documents, Music, Videos, Downloads, Pictures စသဖြင့် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော် Downloads ကို ရွေးပြီး Enter လုပ်ပါတယ်။ folder အထက်တက်ချင်ရင် .. ကို ရွေးပါ။ /home/ubuntu/Downloads ဆိုပြီး ရွေးထားတဲ့ နေရာ သိနိုင်ပါတယ်။
နေရာရွေးပြီးရင် သူပြောထားတဲ့အတိုင်း " C " ကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Files recover လုပ်ပါမယ်။ ခဏ စောင့်လိုက်ပါ။ ရိုးရိုး delete ဆို2minutes လောက်နဲ့ recover လုပ်ပါတယ်။ Quick format ဆိုရင်တော့ နည်းနည်းကြာပါတယ်။ ပြီးရင် Quit ကို Enter, enter, လုပ်သွားလိုက်ပါ။
Recover လုပ်လို့ ရလာတဲ့ဖိုင်တွေက ကျွန်တော် Downloads ဖိုဒါကို ရွေးထားလို့ downloads ဖိုဒါထဲ ရောက်နေပါတယ်။ Photorec ကို root (sudo) နဲ့ run ထားလို့ ဖိုင်တွေက sudo ဖြစ်နေပါတယ်။ Root ကို ပြန်ဖြုတ်ပါမယ်။ ဒါမှ ရိုးရိုး delete လုပ်လို့ရအောင်။
cd Downloads နဲ့ Downloads folder ကို သွားပါတယ်။
ls လို့ ရိုက်ပြီး ဘာဖိုင် ရှိလဲ ကြည့်ပါတယ်။
sudo chmod 777 -R ဖိုဒါ_နာမည် လို့ ရိုက်ပါတယ်။
chmod 777 က root ကနေ ပြန်ဖြုတ်တာပါ။
-R ကတော့ recursive - ဖိုဒါ - သူ့အောက်က ဖိုဒါ - သူ့အောက်က ဖိုင်အားလုံးကို ဆိုလိုတာပါ။
ဒါပါပဲ။ Test Disk နဲ့လဲ ရပါတယ်။ Linux က delete လုပ်ထားတဲ့ partition ကိုတောင် အကောင်းအတိုင်း ဖိုင်မပျက် recover လုပ်နိုင်ပါတယ်။ windows ကနေ low level format ဆိုရင်တော့ recover လုပ်ရခက်ပါတယ်။ ကိုယ့် flash drive အမျိုးအစားနဲ့လဲ ဆိုင်ပါတယ်။ သုံးနည်း ကြိုစမ်းသပ်ထားတာက တကယ် file lost ဖြစ်ရင် ပြန်ဆယ်လို့ ရတာပေါ့။
မြင့်မိုရ်, bagothar85, lu soe, tu tu, yelinoo
Ubuntu မှာ စမ်းသပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် Guest Account ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ Guest Account က /tmp ဖိုဒါမှာ virtual system တစ်ခု လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပြီး Logout ဆို သိမ်းထားတာ အကုန် ပြန်ပျက်ပါတယ်။
Guest Account က Logout လုပ်ရလို့ မကြိုက်ရင် Sandbox သုံးလို့ ရပါတယ်။ Edubuntu ရဲ့ Weblive ကို ရေးတဲ့သူ လုပ်ထားတာပါ။ Software Center ကနေ arkose လို့ရှာပြီး သွင်းပါ။ GUI လဲရှိပါတယ်။
ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ testing အတွက် ကောင်းပါတယ်။ ဥပမာ - Google Chrome Deb file ကို သွင်းမယ်။ သွင်းလို့ အဆင်ပြေမပြေ မသိဘူး။ ဒီတော့ Arkose နဲ့ စမ်းပါမယ်။
sudo arkose -h "cd $PWD; $SHELL"
ဆိုပြီး run လိုက်ပါတယ်။ -h က home folder ကို access ပေးလိုက်တာပါ။ အသေးစိတ်ကို man arkose နဲ့ ဖတ်ပါ။
ဒါဆို username@arkose-tmp...$ ဆိုပြီး ပြောင်းသွားပါတယ်။ Sandbox ထဲ ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ပြတာပါ။
cd Downloads နဲ့ Downloads ဖိုဒါကို သွားပါတယ်။ Sandbox ထဲမှာပါပဲ။
ls လို့ ရိုက်ပြီး ဖိုဒါက ဖိုင်ကို list လုပ်ပါတယ်။
sudo dpkg -i *.deb ဆိုပြီး deb files ကို သွင်းပါတယ်။ error ပြပါတယ်။ dependencies လိုနေလို့ပါ။
ဒီမှာ ကောင်းတာက Sandbox ထဲမှာ လုပ်နေတာ ဖြစ်လို့ system မှာ package break မဖြစ်ပါဘူး။
exit ဆိုပြီး လုပ်လိုက်ရင် sandbox က ပြန်ထွက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာ package လိုနေလဲ ကိုယ်သိပြီး Chrome မသွင်းခင် လိုနေတဲ့ packages ကို အရင်သွင်းရင် break မဖြစ်တော့ပါဘူး။
လိုနေတဲ့ dependencies ကို sudo apt-get install libnss3-1d libxss1 နဲ့ သွင်းပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် Sandbox ထဲမှာပဲ လိုနေတဲ့ဖိုင်ကို sudo apt-get install -f နဲ့ Fix လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Install ပြီးသွားရင် Sandbox ထဲကပဲ google-chrome လို့ ရိုက်ပြီး ဖွင့်လို့ရပါတယ်။ Google-Chrome က sandbox ထဲမှာပဲ ရှိပြီး တကယ်မသွင်းထားပါဘူး။ တခုရှိတာက home folder ကို ပေးသုံးထားလို့ config ဖိုင်တော့ ကျန်ပါတယ်။ ပြန်ဖျက်လို့ ရပါတယ်။
စမ်းဖို့ ကောင်းတယ်ပေါ့။ Package Builders စမ်းချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ဆော့ဝဲ စမ်းချင်ရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ တခုရှိတာက ကိုယ်စမ်းမဲ့ package ကို မူတည်ပြီး command မှာ options လေးတွေ လိုက်ထဲ့ဖို့ လိုပါတယ်။ network ပေးမလား၊ ဘယ် level ပေးမလဲ စသဖြင့်ပေါ့။ Arkose gui သွင်းထားရင် command line ကမဟုတ်ပဲ gui က သုံးလို့ ရပါတယ်။
Virtal box သုံးဖို့ memory နည်းတဲ့သူ၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စမ်းချင်တဲ့သူအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲပါ။
Last edited by g00gle; 17-12-2012 at 04:54 AM..
မျိုးဟန်ထက်, မြင့်မိုရ်, bagothar85, lu soe, tu tu, yelinoo
Softperfect Wifiguard | http://www.softperfect.com/products/wifiguard/
ကိုယ့် network မှာ ရှိတဲ့ စက်တွေကို scan လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Wifi သူများ ခိုးသုံးနေလား ကြည့်ချင်ရင် သုံးလို့ ရတာပေါ့။ Softperfect ဆိုတာက Windows မှာ bandwidth monitor လုပ်တဲ့ Networx ( http://www.softperfect.com/products/networx/ ) ကို ထုတ်တဲ့သူက ထုတ်တာပါ။ သုံးရတာ GUI မို့ လွယ်တယ် ပြောရမယ်။ Install လုပ်ရလဲ လွယ်ပါတယ်။ Hack တဲ့သူကို မိမမိတော့ မပြောတတ်ဘူး။ စမ်းကြည့်တာတော့ ကိုယ့် network ထဲက devices တွေ တွေ့ပါတယ်။
မျိုးဟန်ထက်, မြင့်မိုရ်, bagothar85, lu soe, tu tu
Uber Writer က လှပပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ Markdown Editor တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Markdown ဆိုတာ ဘာလဲ။ Markdown ဆိုတာက John Gruber နဲ့ Aaron Swartz က ထွင်ခဲ့တဲ့ Markup Language တမျိုးပါ။ သူက text ကနေ html ကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ wysiwyg နဲ့တော့ နည်းနည်းကွာတယ်။ သူက စာရိုက်ဖို့ပဲပါတယ်။ ကျန်တာ ဘာမှမပါဘူး။ အကုန်လုံး syntax နဲ့ သွားတယ်။
ဥပမာ - Title ရေးချင်တယ်ဆို #Title_Name# ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ရုံပဲ။ Html ပြောင်းတဲ့အခါ သူ့ဟာသူ title ပြောင်းပေးသွားမယ်။ Bold ဆို **Bold**, Italics ဆို *Italic* ပေါ့။ စာရေးတဲ့အခါ menu, toolbar တွေနဲ့ မရှုပ်ပဲ စာပဲ ရေးချင်တဲ့သူအတွက် အရမ်းကောင်းတဲ့ Markdown Editor ပါ။ အမြင်လဲ လှပါတယ်။ Html, PDF, ODT ကို export လုပ်နိုင်ပါတယ်။
နဲ့သွင်းပါ။ တကယ်လို့ ကြိုက်တယ်။ App Developer ကို donate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် Ubuntu Software Center ကနေ ပိုက်ဆံနဲ့ ၀ယ်ပြီး donate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Markdown syntax ကို သိချင်ရင် http://daringfireball.net/projects/markdown/ မှာ ကြည့်ပါ။
Uber Writer က markdown အပြင် pandocs-markdown ကိုပါ support လုပ်ပါတယ်။ http://johnmacfarlane.net/pandoc/REA...ndocs-markdown မှာ ကြည့်ပါ။
Last edited by g00gle; 26-12-2012 at 12:59 PM..
မြင့်မိုရ်, bagothar85, KznT, tu tu
Ubuntu အတွက် Weather Indicator သိသလောက် ၂ ခု ရှိပါတယ်။ တခုက my-weather-indicator ဆိုတာပါ။ Ubuntu Software Center မှာ ရှိပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဆော့ဝဲအသစ် Stormcloud ပါ။ Stormcloud က OMG Ubuntu Website ကို Design ဆွဲပေးတဲ့သူ လုပ်ထားတာပါ။ ပထမက သူ့မှာ ကွန်ပျူတာတောင် ကိုယ်ပိုင်မရှိလို့ သူများ ကွန်ပျူတာနဲ့ ဆော့ဝဲရေးရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Stormcloud, Nitro Task, Light Read စတဲ့ ဆော့ဝဲကောင်းတွေပါ။ Donation ရတာကို ကွန်ပျူတာဝယ်မယ်ဆိုပါတယ်။
my-weather-indicator က အရင်တုန်းက မကောင်းပါဘူး။ Panel မှာ Temperature, wind လေး ပြရုံလောက်ပဲ။ နောက် Ubuntu 12.04 မှာ အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။ အခု Update လုပ်လိုက်တဲ့ version မှာတော့ 12.04 မှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ အပြင် HTC style ဒီလို Widget လှလှလေးပါ မြင်အောင် လုပ်လို့ ရပါတယ်။
ပါ။ Stormcloud ကတော့ ရိုးရိုး color နဲ့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ရှိပါတယ်။ သူကောင်းတာက Unity Launcher မှာ Temperature ကို indicate လုပ်နိုင်တော့ Panel မှာ Icons အများကြီး ရှုပ်နေတာ မကြိုက်ရင် သူက ကောင်းပါတယ်။ Color ကတော့ transparency မရလို့ background wallpaper နဲ့ ကိုက်အောင် ရွေးရပါမယ်။
Stormcloud free မရတော့ပါဘူးတဲ့။
Last edited by g00gle; 25-12-2012 at 04:04 PM..
မြင့်မိုရ်, bagothar85, KznT, tu tu, yelinoo
နာမည်ကြီး CD ကူးတဲ့ ဆော့ဝဲဖြစ်တဲ့ Nero ဆော့ဝဲပါ။ အရင်က Linux version မထုတ်တော့ဘူးဆိုပြီး ရပ်နေရာက ဒီနှစ်ထဲမှာ version အသစ်ထုတ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ နာမည်ကြီး Dreamworks ရဲ့ Opensource Project ပါ။
Last edited by g00gle; 26-12-2012 at 12:48 PM..
bagothar85, KznT, tu tu, yelinoo
Video Editor တစ်ခုပါ။ လူသိပ်မသိဘူး ထင်လို့။ တခြား Openshot, Pitivi တို့ကတော့ နာမည်ပိုကြီးပါတယ်။
Janurary လထဲမှာ Hollywood က Film-Producers တွေတောင် သုံးတဲ့ Lightworks ထွက်ဖို့ ရှိပါတယ်။ စောင့်ကြည့်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဆော့ဝဲပါ။
Youtube က CC (closed captions) ကို srt format နဲ့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်တဲ့ ဆော့ဝဲပါ။ Java သွင်းဖို့ လိုပါမယ်။ Software Center က OpenJDK java 6/7 runtime သွင်းလိုက်ပါ။ နောက် ရလာတဲ့ Google2SRT.jar ကို right click >> properties >> Allow program as executable လုပ်ပါ။ ပြီးရင် Right click >> open with openjdk java 6/7 runtime ဆိုရပါပြီ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ g00gle အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Master PDF Editor for Linux (Free)
ဒီမနက် လျှေက်ကြည့်ရင်း Windows သမားတွေအတွက် မနာလိုစရာ တစ်ခုကို သွားတွေ့လိုက်တယ် ။ Master PDF Editor ဆိုတဲ့ PDF Editor ကို Windows နဲ့ Mac အတွက်တော့ ၄၉.၉၅ ဒေါ်လာနဲ့ ရောင်းပြီး Linux အတွက် Free ပေးထားတာပါ။ Master PDF Editor ကို PDF တွေ လုပ်ရင်း သွားတွေ့လို့ သုံးကြည့်တာ ဆိုဒ်သေးသေးလေးနဲ့ တော်တော်လေး အသုံးတည့်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Windows အတွက် 15 days Trial ပဲပေးပြီး၊ Watermark တွေ Page Limit တွေနဲ့ ကန့်သတ်ထားတယ်။ ဒါနဲ့ အကြံအဖန် လိုက်ရှာကြည့်တော့လည်း ဘယ်မှာမှ မတွေ့လို့ မသုံးပဲ နေလိုက်ရတယ်။ ဒီနေ့မှ Linux အတွက် အလကားပေးတယ်ဆိုတာ သိသွားပါတယ်။
Master PDF Editor ဟာဆို ကျွန်တော်တို့ သာမန် PDF ဖန်တီးတဲ့သူတွေ လိုအပ်တဲ့ Bookmarks ထည့်တာ၊ Link ထည့်တာ ၊ Page တွေ Insert , Delete, Extract လုပ်တာ စတာတွေအပြင်၊ ပုံတွေ စာတွေ ထပ်ထည့်တာ၊ ဖျက်တာတွေနဲ့ တခြား Features ပေါင်းများစွာ ပါ,ပါသေးတယ်။ ဒီ Master PDF Editor မှာ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ PDF ထဲက စာတွေကို ပြန်ပြင်လို့ရတာလေးကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ စာလုံးပေါင်းမှားသွားတာတွေ ၊ စာလုံးပေါင်းလိုသွားတာတွေကို ပြန်ပြင်၊ ပြန်ဖြည့်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာဖောင့် တော်တော်များများအတွက် ရပါတယ်။ တချို့ဖောင့်အနည်းငယ်တော့ အဆင်မပြေတာ ရှိပါတယ်။ Zawgyi-one , Unicode fonts တွေ အတွက်ကတော့ လုံးဝ အဆင်ပြေပါတယ်။ Ubuntu မှာတော့ Software Center မှာ ရှိမလား မသိဘူး။ Ubuntu မသုံးတော့ သေချာမသိပါဘူး။ ကျွန်တော်က ဒီနေရာကနေ Download ပြီး၊ Extract လုပ်၊ ပြီးတော့ အထဲမှာပါတဲ့ pdfeditor ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို ဖွင့်ပြီး သုံးလိုက်တာပါပဲ။ Portable သဘောမျိုးပေါ့။ လိုအပ်တဲ့သူတွေ သုံးကြည့်လိုက်ကြပါ။ အဆင်ပြေကြပါစေ ခင်ဗျာ...
Last edited by bagothar85; 06-03-2013 at 02:40 PM..
g00gle, PyaitSone, tu tu
Intel ကနေ Graphics Drivers တွေ Update လုပ်ဖို့ ဆော့ဝဲတစ်ခု ထုတ်လိုက်ပါပြီ။ https://01.org/linuxgraphics/downloads/2013/intel-linux-graphics-installer ကနေ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Webupd8.org မှာတော့ 64-bit Ubuntu 12.10 မှာ အဆင်မပြေဘူး ရေးထားတယ်။ 32-bit 12.10 မှာတော့ စမ်းကြည့်တာ အဆင်ပြေပါတယ်။
ပထမဆုံး Intel PPA ထဲ့မှာဖြစ်လို့ authentication key ကို အရင်ထဲ့ပေးပါ။
https://download.01.org/gfx/RPM-GPG-KEY-ilg ကို right-click >> save လုပ်ပြီး software sources ကနေ key ကို ထဲ့ပါ။
နောက် https://01.org/linuxgraphics/downloa...hics-installer ကနေ ကိုယ့် Ubuntu versions အလိုက် ဖိုင်ကို ဒေါင်းပြီး သွင်းပါ။
သွင်းပြီးရင် Intel လို့ Dash မှာ ရှာပြီး ဆော့ဝဲ updater ကို run ပေးရင် ရပါပြီ။ Internet တော့လိုပါမယ်။ ပြီးရင် reboot လုပ်ပါ။
bagothar85, PyaitSone, tu tu